औपचारिक सचिवालय बैठक बोलाउने प्रचण्डको तयारी
वीरेन्द्र ओली सोमबार, कात्तिक २४, २०७७, २१:१२
काठमाडौँ- नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले औपचारिक सचिवालय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझसम्म पनि बैठक नबोलाएपछि प्रचण्डले सचिवालयको औपचारिक बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन्।
गत शुक्रबार पनि प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाएपनि त्यसलाई अनौपचारिक भनिएको थियो। त्यसपछि बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका थिए। तर उनले तत्काल बैठक बोलाउन चासो नदिएपछि प्रचण्डले औपचारिक बैठक बोलाउने गृहकार्य थालेका हुन्।
‘अबको केही दिनमा पार्टी सचिवालयको बैठक बस्छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तत्काल बैठक बस्ने वातावरण नबने बहुमत सचिवालय सदस्यको मात्रै भएपनि औपचारिक बैठक बस्छ।’ प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्य तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने अडानमा यथावत छन्।
पछिल्लो विवादमा प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरू पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गराएर जाने रणनीतिमा छन्। पार्टीमा ओलीको स्वेच्छाचारिता बढेकाले एक ढिक्का भई मुकाबिला गर्ने बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको तयारी छ। तर, ओली पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमत भएकाले बैठक पर धकेल्न विभिन्न रणनीति बनाइरहेका छन्।
बहुमत सचिवालय सदस्यले बैठक बस्न दिएको समयावधिभित्र सोमबार बिहान महासचिव विष्णु पौडेल अध्यक्ष ओलीको सन्देश लिएर प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। विधान बमोजिम बैठक बोलाउन आह्वान गरेको अमूर्त पत्र लिएर पौडेलले प्रचण्डलाई भेटेका थिए।
ओलीले विधान बमोजिम भन्दै तत्काल बैठक नबोलाई १५ दिन धकेल्ने योजना बनाएका छन्। नेकपा अन्तरिम विधान–२०७५ को धारा ५९ (४) मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिनाभित्र र मातहतका कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ। विधानको सोही व्यवस्थामा टेकेर ओलीले सचिवालय बैठक १५ दिन धकेल्ने र आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोजेको नेताहरूको विश्लेषण छ। केही समय लिँदा पार्टी विवाद मत्थर हुन सक्ने विश्वासमा मंसिर पहिलो सातासम्ममा बैठक धकेल्ने तयारी ओलीको छ। यसो हुँदा पार्टीमा बहुमत सचिवालय सदस्यको माग पनि सम्बोधन हुने र आफ्नो पक्षमा माहोल सिर्जना पनि गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ। यस रस्साकस्सीमा दुवै पक्षले सचिवालय बैठकललाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेकाले थप विवाद चर्किने देखिएको छ।
प्रचण्डसँग टाढिएका पूर्वमाओवादी नेता के गर्लान्?
पार्टी विवादमा प्रचण्डबाट टाढिएका भनिएका पूर्वमाओवादी नेताहरु गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। पार्टी विभाजनको पक्षमा नभई स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय दुवै अध्यक्षले पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पार्टीमा ओली नजिक भनिएका पूर्वमाओवादीतर्फका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, मणि थापा, देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरू स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई दुवै अध्यक्षले अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। ‘हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ। पार्टीलाई एक बनाएर लैजानु पर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले भने, ‘भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले ओली कमरेडलाई सरकार र प्रचण्ड कमरेडलाई पार्टीका काममा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय दुवै अध्यक्षले पालना गर्नुपर्छ।’ बैठकको निर्णयअनुसार दुवै अध्यक्षले जिम्मेवारी पूरा गरे पार्टीमा थप विवाद गर्नुपर्ने कारण नभएको थापाको भनाइ छ।
पार्टी विवादमा पूर्वमाओवादी समूहका केही नेता ओली खेमामा देखिएपनि फाइनल डिसिजन गर्नुपर्ने अवस्था आए यसै भन्न नसकिने प्रचण्ड समूहका अर्का एक नेताले बताए। ‘यदि पार्टी विभाजन नै हुने अवस्था आए प्रचण्ड कमरेडबाट टाढिएका भनिएका नेताहरू ओली कमरेडसँगै हुनुहोला भन्न सकिन्न,’ ती नेताले भने, ‘त्यसो हुँदा अनेक हिसाबकिताब चल्छ। जसमा पार्टी फुटको आरोप कसलाई लाग्छ? पार्टी संस्थापन कुन समूह हुन्छ? पार्टीमा कसको पकड हुन्छ? यस्ता फ्याक्टरले महत्व राख्छ।’
एकपछि अर्को गर्दै ओलीले पूर्वमाओवादीका नेतालाई आफ्ना पक्षमा पारेको भन्दै प्रचण्ड चिढिएका छन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रचण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। आफ्नो पक्षमा आएका पूर्वमाओवादीसहित आफू निकटका मन्त्रीलाई प्रचण्डले छानीछानी हटाउन खोजेको भन्दै ओली सशंकित भएका थिए। यदि यी मन्त्रीलाई हटाउने भए त्यसको बदलामा माओवादी समूहबाट टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल र प्रभु साह ल्याउने ओलीले बताएपछि प्रचण्ड नराम्रोसँग झस्किएको ती नेताको भनाइ छ। प्रचण्डले आफ्ना समूहमा नखेल्न चेतावनी दिएपछि दुई अध्यक्षको सम्बन्ध टाढिँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
वामदेवले मझधारमा उभिएर देखेका तीन 'महत्वपूर्ण' अवसर
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र वैशाखमा निर्वाचन नभए के हुन्छ ? संविधानको व्यवस्थासँगै त्यसबेला न्यायालय र तत्कालीन प्रधानन्यायधीशप्रति सबै दलको विश्वास थियो। अहिले त्यो विश्वास पनि धेरथोर डगमगाएक... सोमबार, माघ ५, २०७७
वार्ताका लागि काठमाडौं हिँडेका बास्तोला प्रहरी हिरासतमा विप्लवले त्यतिबेला सत्तामा रहेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनौती दिँदै भनेका थिए- 'दरबार हत्याकाण्ड.... जति सजिलो थियो, त्यति हामीमाथ... आइतबार, माघ ४, २०७७
प्रचण्ड-नेपालतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने- झगडियाको कामै मुद्दा हाल्ने हो ‘बैठकमा आएनन् कहाँ हराए भनेको त माइतघर मण्डलामा गएर यहाँ छौँ। कहाँ हराए भनेको निर्वाचन आयोगमा पुगेर हामी यहाँ छौँ। कहाँ हराए भनेको अ... आइतबार, माघ ४, २०७७